Bokin' ny Ohabolana - Wikipedia
Bokin' ny Ohabolana
(tonga teto avy amin'ny Bokin'ny Ohabolana)
Ny Bokin' ny Ohabolana na Ohabolana dia boky ao amin' ny Testamenta Taloha, ao amin' ny Baiboly, izay tafiditra ao amin'ireo boky atao hoe "Soratra masina" (Hagiografa) na Ketuvim (na Ketubim) ao amin' ny Baiboly jiosy na Tanakh. Ny Bokin' ny Ohabolana dia fanangonam-pitenenana izay nampiasaina teo amin' i Israely tany aloha mba hampianarana ny vahoakan' Andriamanitra ny fomba tokony hiainany ao amin' ny fahamarinana araka ny Fahendrena.
Manoratra ohabolana i Solomona, nataon'i Gustave Doré, 1866
Nosoratana hanana endrika tononkalo ny ohabolana, sahala amin' ny salamo. Ahitana teny mirakitra fahendrena nentin-drazana ao, toy ny oha-pitenenana fohifohy isan-karazany sy tononkalo koa izay mahakasika ny fitondran-tena araka an' Andriamanitra sy fitsikerana ny fisainana ratsy mbamin' ny asa ratsin' ny olona ary maneho ny vokatr' izany.
Isan' ireo lohahevitra voizin' ny Bokin' ny Ohabolana ny maha fanomezana avy amin' Andriamanitra ny fahendrena, dia ny fahendrena izay tokony hananan' ny olona amin' ny fotoana sy toerana rehetra ary amin' ny sehatra rehetra. Ampianariny ny tokony hanaovana sy hitiavana ny rariny sy ny fanetren-tena ary ny fananana toetra mahatoky. Tsy manavaka saranga ny ohabolana fa mahakasika ny sokajin' olona rehetra.
2 Ny fanoratana ny Bokin' ny Ohabolana
3.1 Hafatrafatry ny Fahendrena (1.1 -- 9.18)
3.2 Ohabolan' i Sôlômôna, andiany voalohany (10.1 -- 22.16)
3.3 Ohabolan' ny Olonkendry (22.17 -- 24.34)
3.4 Ohabolan' i Sôlômôna, andiany faharoa (25.1 -- 29.27)
3.5 Ohabolana avy ivenan' i Israely (30.1 -- 31.31)
Ny teny hoe Ohabolana dia teny malagasy nenti-nandika ny teny hebreo hoe Míshlê izay midika hoe "fanoharana" na "ohabolana". Atao hoe שְׁלֹמֹה מִשְלֵי / Míshlê Shlomoh io boky io ao amin'ny Tanakh, izany hoe "Fanoharan' i Sôlômôna" na "Ohabolan' i Sôlômôna". Amin' ny teny latina izy dia atao hoe Liber proverbiorum na Proverbia (ao amin' ny Volgata). Amin' ny teny grika kosa dia Παροιμίαι / Paroimiai (ao amin' ny Sptoaginta na Septanta). Marihina fa niala ny fisian' ny anaran' i Sôlômôna na Salômôna ao amin' ny lohatenin' ny boky amin' ny Baiboly maro natonta taty aoriana.
Ny fanoratana ny Bokin' ny OhabolanaHanova
Ny ankamaroan' ireo ohabolana ao amin' ny boky dia lazain' io boky io fa nosoratan' i Solomona (Oha. 1.1; 10.1; 25.1), ary ny sasany nataon' i Agora (Oha. 30.1) sy ny mpanjaka Lemoela (Oha. 31.1).
Azo zaraina dimy ny Bokin' ny Ohabolana araka ny olona voalaza fa nanoratra azy:
Hafatrafatry ny Fahendrena (1.1 -- 9.18);
Ohabolan' i Sôlômôna, andiany voalohany (10.1 -- 22.16);
Ohabolan' ny Olonkendry (22.17 -- 24.34);
Ohabolan' i Sôlômôna, andiany faharoa (25.1 -- 29.27);
Ohabolana avy ivenan' i Israely (30.1 -- 31.31).
Toy izao ny antsipiriany amin' izany:
Hafatrafatry ny Fahendrena (1.1 -- 9.18)Hanova
Teny fampidirana: miaina araka ny Fahendrena (1.1-7)
Famporisihana hikatsaka ny Fahendrena (1.8 - 7.27)
Fiderana ny Fahendrena (8.1-35)
Ny hadalana ampitahaina amin' ny Fahendrena (9.1-18)
Ohabolan' i Sôlômôna, andiany voalohany (10.1 -- 22.16)Hanova
Ohabolan' ny Olonkendry (22.17 -- 24.34)Hanova
Ohabolan' i Sôlômôna, andiany faharoa (25.1 -- 29.27)Hanova
Ohabolana avy ivenan' i Israely (30.1 -- 31.31)Hanova
Ohabolan' i Agora (30.1-33)
Ohabolan' ny mpanjaka Lemoela (31.1-9)
Ohabolana manaraka abidy: vehivavy hendry (31.10-31)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_ny_Ohabolana&oldid=1041853"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 02:22
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 02:22 ity pejy ity.